हनिमुन : जिन्दगीकै प्याकेज - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
पूर्वीय परम्परामा हनिमुन भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन । विवाहपछिको पहिलो रातलाई सुहागरात भन्ने चलन छ । हनिमुन पश्चिमबाट विकसित भएको परम्परा हो, तर अहिले यो ग्लोबल भैसकेको छ । हनिमुन नवदम्पतीले एक–अर्कालाई बढी चिन्ने–बुझ्ने प्रकृया हो । सामाजिक पक्षबाट हेर्ने हो भने दुई जोइपोइ होहल्ला र भीडभाडबाट टाढा मनको कुरा मात्र होइन मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, क्यामेस्ट्रिवाइज सबै कुरा एक–आपसमा साटेर फर्कंदा एउटा पिण्ड बनोस् भन्नु यसको तात्पर्य हो ।
हामीकहाँ मागी विवाह र प्रेम विवाहको चलन छ । मागी विवाहमा पनि चिनाइदिएर एक–अर्कामा प्रेम बसाइदिने चलन बढ्दैछ । प्रेम विवाहमा पहिले चिन्ने–बुझ्ने अनि विवाह गर्ने चलन छ । एउटा सत्य के हो भने प्रेमको चरम बिन्दुमा पुगेपछि मात्र सेक्स भन्ने कुरा आउँछ । यद्यपि मागी विवाहपछि भने यौनसम्पर्कमा चरम आनन्द प्राप्तिपछि मात्र माया बढ्छ । जिन्दगीमा माया बसाउन सुरुवात गराउने प्रस्थान बिन्दु नै हनिमुन हो ।
अब आउँछ हनिमुन कस्तो ठाउँमा जाने ? हनिमुनका लागि यस्तो ठाउँ छान्नुपर्छ जहाँ नवदम्पतीलाई कसैले नचिनून् । बोल्ने भाषा पनि त्यहाँका मानिसले नबुझून् । मानिसहरूले नयाँ ठाउँ वा विदेश छान्नुको कारण पनि त्यही हो । हनिमुनमा दम्पतीले स्वतन्त्र भएर मनमा लागेका सबै कुरा एक–अर्काबीच खोल्ने वातावरण बन्नुपर्छ । यो मानसिक मात्र होइन शारीरिक रूपमा पनि आवश्यक कुरा हो । हरेक कुराको चरम बिन्दुमा पुग्ने र जुनी–जुनीलाई सम्झिरहने वातावरण बनाउन हनिमुन जाने हो । हनिमुनलाई जति राम्रो बनाएर त्यसका राम्रा पक्षलाई दिमागमा राख्न सकिन्छ जिन्दगी पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ । यतिबेला हुने प्रत्येक घटना एवं व्यवहार माया, ममता र विश्वास जगाउने खालको हुनुपर्छ ।
अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो समाजमा यौन भन्ने कुरालाई हौवाका रूपमा हेरिन्छ । यद्यपि एक जोडी प्रेमी–प्रेमिका र श्रीमान्–श्रीमतीबीच हुने यौनसम्पर्क एक्सट्रिम हुनुपर्छ । त्यो एक्सट्रिम होस् भनेर नै समाज बाहिर, चिनेका मानिसभन्दा पर एकान्तमा गएर हनिमुन मनाइन्छ । बाहिरबाट हेर्दा एउटा पक्ष मात्र हेरिएको हुन्छ, तर त्यहाँ पुगेपछि दुवैले खुल्ला हुन प्रत्येक कार्यदेखि प्रत्येक अंगको अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ । त्यहाँ श्रीमान्ले श्रीमतीको आनीबानीदेखि क्रियाकलाप देख्ने र श्रीमतीले पनि श्रीमान्का आनीबानी, क्रियाकलाप, स्वभाव सबै अवलोकन गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ ।
एक–अर्काका सबै कुरा थाहा पाएपछि कमेन्ट गर्न सक्ने, राम्रा कुरालाई नयाँ जिन्दगीको प्याकेज बनाउन सक्ने हुनुपर्छ । नराम्रा कुरामा सुधार गर्ने अवसर पनि हो यो । किन यी सबै कुरा गर्न नचिनेको ठाउँमा हनिमुन जाने भन्ने कुरा पनि आउँछ । हाम्रो जस्तो बन्द समाजमा सबै कुरा खुल्न सम्भव छैन । त्यसैले भाषा पनि नमिल्ने स्थान छान्नु भनिएको हो । यस्तो वातावरणले एक–अर्काको भावना खुल्ला रूपमा बुझ्न सघाउँछ । त्यहाँ पुरुषमा भएको पूर्ण पुरुषपन र महिलामा भएको पूर्ण महिलापन खुलेर प्रदर्शित हुनुपर्छ । यसले एक–अर्कालाई कदर गर्ने बानी बसाउँछ ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जीवनको सुखको एउटा पाटो यौन जीवन पनि हो । एक्सट्रिम माया (पति–पत्नी वा प्रेमी–प्रेमिका) मा परेपछि त्यसको तह हुँदैन । त्यो तहमा पुगेर यौनसम्पर्क भएपछि न त पोर्नेग्राफीको लत लाग्छ न त त्यस्तो भिडियो हेर्नुपर्छ । आफ्नो माइन्डमा जुन कुरा बस्छ मानिसले त्यही कुरा बढी सोच्छ । यस्तो खुल्लापनको सुरुवाती बिन्दु भनेको हनिमुन हो । त्यहीँबाट भावना खुल्ने, एक–अर्कामा आदर गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।
हनिमुनको वास्तविक तत्व भनेको आफूलाई नचिन्ने प्रकृति र संसार मात्र हो । कतिपयले विदेश गए मात्र हनिमुन हुन्छ भन्ने मान्छन् । हनिमुन भनेको दुई जनामात्र रहेर हर कुरामा एक्सट्रिममा पुग्ने वातावरण हो । जसले गर्दा त्यसपछिको नियमित जीवनमा एक–अर्कालाई आदर–सत्कारसहित अघि बढ्न सकियोस् ।
विवाह भन्नासाथ नवदम्पतीहरू ‘हनिमुन’ को कल्पना गरिहाल्छन् । हनिमुनलाई कसरी सुखमय र अविस्मरणीय बनाउने भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । हनिमुनलाई दम्पतीहरू आत्मीय हुने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिन्छन् । एक–अर्काका आनीबानी र व्यवहारलाई नजिकबाट बुझ्ने उपयुक्त मौका भनेकै हनिमुन हो । घरपरिवारभन्दा टाढा रहेर हुने यो आत्मीयताले शारीरिक सामीप्यतामात्र राख्दैन यसले दुई जनाबीचको डर–त्रासको मनोविज्ञानलाई तोड्न सहज बनाउने पूर्वीय सौन्दर्यका ज्ञाता डा. सुशील कोइराला बताउँछन् । मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हनिमुन अति उपयोगी हुने उनको ठहर छ । हनिमुनका लागि नयाँ ठाउँमा गइने हुँदा विवाह हँुदाका बखतको कामको तनावबाट शान्ति मिल्छ । घरपरिवारमा सहज नभएको यौन सम्बन्धका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ । स्वस्थ्य यौन संसर्गका लागि विवाह लगत्तै गइने हनिमुन मात्र नभएर प्रत्येक वर्ष हनिमुन मनाउन श्रीमान्–श्रीमती घरबाट टाढा निस्कनुपर्ने डा. कोइराला बताउँछन् । विवाहको तनावले महिला वा पुरुष दुवैमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको हुनसक्छ । यो समस्या महिलामा अझ बढी देखिन्छ । त्यसैले पूर्वावस्थामा आउन पनि हनिमुन आवश्यक हुन्छ ।
नवदम्पतीले हनिमुनसँगै स्वास्थ्यका अन्य केही कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि श्रीमान्–श्रीमतीबीच केही वर्ष बच्चा नजन्माउने सल्लाह भएको छ भने सुरक्षित यौन सम्पर्कका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि चिकित्सकहरूसँग परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ । दम्पतीबीच यौनका विषयमा नलजाई कुराकानी हुनु राम्रो मानिन्छ ।
सम्भोगका बेला एक–अर्कासँग खुलेर कुराकानी गर्नुपर्छ । सम्भोग सुरु हुनुअघि एक–अर्काको प्रशंसा गर्नुपर्छ । एक–अर्कालाई राम्रो लाग्ने कुराका बारेमा जान्न खोज्ने र आफ्नो कुरा पनि खुलेर भन्नुपर्छ । यदि सम्भोगका बेला एक–अर्कालाई केही दिने वाचा गरिएको छ भने त्यो अवश्य पूरा गर्नुपर्छ । एकले अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ । सम्भोगका क्रममा कन्डम प्रयोग गर्ने हो भने लुब्रिकेन्ट अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कतिपय पुरुष पहिलो यौनसम्पर्कमा लजाउने–डराउने हुँदा यौन उत्तेजना आउन समस्या हुन सक्छ । त्यस्तो भए पर्याप्त मात्रामा पाकक्रीडा गर्नुपर्छ । विशेषत: यौनसम्पर्क भन्दा पनि एक–अर्कामा माया दर्शाउनु उपयुक्त हुन्छ । पहिलोपटक यौनसम्पर्क गर्दा महिलाहरूमा पिसाबको संक्रमणको सम्भावना बढी हुने हुँदा दुवैले सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यौनसम्पर्क गर्नुअघि दुवैले राम्रोसँग यौनाङ्गको सरसफाइ गर्नुपर्छ । हनिमुन जाने समयसम्ममा नवविवाहित दम्पती एक–अर्कामा पूर्णरूपमा घुलमिल भैनसक्ने हुँदा आफूले जानेको काम र कुरा मात्र गर्नुपर्छ । यौनको मामिलामा उत्ताउलोपन देखाउनु हुँदैन ।